ကောင်းကင်ဖြူ: အိမ်မက်မဟုတ်သော ......
နှင်းမှုံတွေကတဖွဲဖွဲန့ဲ အေးလှသည်တော့မဟုတ် ၊ လက်ထဲမှာ ကိုင်ထားတဲ့ ငါးစာလက်ကျန်ကို ကန်ထဲသို့ နောက်ဆုံးကြိမ်ပစ်ကျွေးလိုက်၏ ။ စိတ်ထဲမှာ လန်းဆန်းမှုတွေ ကြည်နှုးမှု့ တွေနဲ့ ပြည့်လို့ ပေါ့ ။ ရောင်စုံပန်းတို့ သူတို့ အလှကိုစွဲဆောင်နေကြလေရဲ့ ၊ အလိုက်သိတဲ့ ဌက်ကလေးတစ်ကောင်က နံနက်ခင်းတေးတစ်ပုဒ်ကို
သီဆိုနေ၏ ။ ကျင့်သားမကျတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ကြောင့်ထင်တယ် ကိုယ့်ကို ပြန်ကြည့်မိ၏ ။ ဟုတ်ပါတယ် ငါမှ ငါအစစ်ပါ ၊ တချိန် ကတော့စိတ်ကူးယဉ်ခဲ့ဘူးပါတယ် …. အေးစက်တဲ့လေနဲ့ ပန်းရနံ့ တို့ က ကျနော် ရင်ဘတ်ပေါ်တိုး၍ တိုက်ခတ်သွားသည် ။ ဘယ်လိုမှ မလွဲနိုင်ဘူးလေ ကျနော် ကျနော်အေးချမ်းတဲ့ ခံစားမှု့ တခုခံစား လိုက်ရတယ်လေ ပို၍သေချာအောင် မြက်ခင်းစိမ်းပေါ် မရဲတရဲ လမ်းလျှောက်ကြည့်၏ ။ ဟုတ်တယ်ဟ တကယ်ပဲကို မြက်ပင်လေတွေနဲ့ ကျနော် ခြေတောက်ထိတွေ့ တဲ့ခံစားမှု့ ။
ပတ်ဝန်းကျင်ကို အခုမှသတိထားမိ၏ ။ မြက်ခင်းရဲ့ အစွန်းမှာ အဖြူရောင်စာပွဲတစ်လုံး ၊
အဖြူရောင်ထိုင်ခုံတစ်လုံး ၊ မျက်နှာချင်းဆိုင်ထိုင်ခုံလေးမှာ …….. ဟင်…..သူမ……. ဟုတ်တယ် … သူမ မှ သူမ အစစ်ပါ …. ကျနော်ကိုမမြင်ဘူးထင်တယ် ….. လက်ထဲမှာလဲ စာအုပ်တစ်ကိုင်၍ စိတ်ဝင်တစားဖတ်နေ၏ ။ ကျနော်ခြေတောက်တွေက အလိုလို သူမ ဆီသို့ ……. ။ အနားရောက်တော့ သူမ က ကျနော်ရှိမှန်း အလိုလိုသိနေတယ်ထင်တယ် ။ သူမ ဆီက အပြုံးတစ်ခု နောက်ပြီးအဓိပ္ပါယ်ပြည့်စုံတဲ့ အကြည့်တစ်ခု ….. သူမ မျက်လုံးတွေကိုပဲ အရင်ဘာသာပြန်လိုက်မိ၏ ။ ထိုင်ပြီး ကော်ဖီ သောက်ပါအုံးတဲ့ …… ။ အဖြူရောင်ခုံအလွတ်လေဆီသို့ဝင်ထိုင်မိလိုက်သည် ။ သူမ ကတော့စာအုပ် ဆက်ဖတ်နေလေရဲ့ ၊ ကျနော် မျက်လုံးတွေက သူမ မျက်နှာပေါ်ကမဆင်းသေးဘူးလေ …. ဟုတ်ပါသည်….. ကျနော် ဘဝ မှာ သူမဆီက အပြုံးတခုကို ခုဏလေးမှတွေ့ လိုက်ရတာပါ ။ အငွေ့ မသေသေးတဲ့ ကော်ဖီရနံ့ က ကျနော် စိတ်ကိုဆွဲဆောင်နေလေသည် ။
ကျနော် လက်တွေအလိုလို ကော်ဖီခွက်ဆီသို့….. ဟာ ….. အခုမှကြည့်မိတယ် စာပွဲပေါ်ကပန်းအိုးထဲမှာ ပန်းတစ်ခက် ….. ဒီ … ပန်း …. ဒါ ချယ်ရီဖြူ … ဟုတ်တယ် ဒါ ချယ်ရီဖြူ မှ ချယ်ရီဖြူ အစစ် ………….. ဟုတ်ပါသည် ကျနော် ဘဝ မှာ ချယ်ရီဖြူ ဆိုတဲ့ ပန်းလေးတစ်ခက်ကို အပြင်မှာ အခုမှ မြင်ဘူးတာပါ တစ်ခါမှဒီလောက်ထိစိတ်လှုပ်ရှားတဲ့ ဖြစ်ရပ်မျိုးမကြုံဘူးတာ ဝန်ခံပါတယ် ….. ကျနော် စိတ်ကိုငြိမ်အောင် အရင်ထိန်းလိုက်၏ ။ ကော်ဖီ တငုံလောက်သောက်ချလိုက်မိ၏ ။ ရင်ထဲမှာနွေးထွေမှု့ နဲ့ အတူ ကျနော်စိတ်တွေ ငြိမ်ကျသွားလေသည် ။ ဖြစ်ရပ်အားလုံးသည် ကျနော်နှင့် အမှန်တကယ်ရှိနေသည် ။ သူမ လည်း ကျနော်နဲ့ အတူရှိနေတယ်လေ ။ ဟုတ်ပါတယ် …. အရာအားလုံးကို ကျနော် နားလည်လိုက်ပါပြီ …. ဒါဟာ အိမ်မက်မဟုတ်ဘူးလေ ။ သူမ ဘဝကို ကျနော် ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ဆိုတာထက် မြတ်နိုးခွင့်ရခဲ့ပြီလေ ။ သူမ မျက်နှာပေါ်မှာ အေးချမ်းမှု့ တွေကနေရာ အပြည့်ပေါ့ ။
ကမ္ဘာတွေခြား လို့ ဝေးနေ လဲ
မင်း က ငါ့ အနားမှာ အမြဲရှိပါတယ်
မင်း က ငါ့ အနားမှာ အမြဲရှိနေပါတယ်
ထာဝရ အတူရှိမဲ့ နေရက်များဆီသို့ 
အမှတ်တရ ..... january 22
Posted by မောင်ဘုန်း at 11:39 PM